Isitshisi semifuno yecuba (okanye ngokulula, into yokusila) sisixhobo esilijikelezileyo esineenxalenye ezi-4 ezahlulayo kwaye ezinamazinyo okanye izikhonkwane zilungelelaniswe ngendlela yokuba xa kuguqulwe inxenye ephezulu, izinto zangaphakathi zibotshwe. Inxalenye yesi-3 iqokeleleke enye egumbini elingaphantsi kwaye icoca ikief. Inxalenye yesi-4 iqokelelwe kwikofu.
Nangona abavelisi bebanga ukuba yenzelwe ukusetyenziswa ngamayeza kunye neziqholo zokupheka, zihlala zisetyenziselwa ukukrola, okukhokelela kwimveliso enokuthi ngokulula isongelwe "kwindibaniselwano" evutha ngokulinganayo. Iigrafu zokugaya imifuno yecuba zihlala zenziwe ngentsimbi okanye iplastiki kwaye zinemibala eyahlukeneyo kunye nesinyithi esikhazimlisiweyo.
Egqithileyo Ukutshaya iGrinders
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu weCustom CNC machining parts
Isitshisi sokhula ukhula
Ingca Ukhula Grinder
aluminium imifuno grinder